Download Game Ohlwini Lozalo Luka-2: Revolution Apk Latest Version
Ikhasi Lasekhaya Awokubambisana Iqhazaohlwini lozalo luka-2: revolution
ohlwini lozalo luka-2: revolution
inguquko uye waphumelela MMORPG qalwa.a!
Thwebula (95.00 MB)
Mayelana Lineage 2: Revolution
Singene a obumangalisayo entsha fantasy world lanetibonwa emangalisa amandla yi-ngiyaphupha Engine 4. Experience ngezinga elikhulu, evulekile-emhlabeni ukulwa lapho kuze kube abadlali 200 kungaba empini ngesikhathi real on a screen olulodwa! Party up nabantu ezingabazi noma ifomu imindeni nabangani ayokuhlula yeqhawe kugasela emigodini, sehlise ezisabekayo boss izilo, noma ancintisane zabanye abadlali emhlabeni wonke ezimpini ukuncintisana.
Lineage 2: Revolution kuyinto groundbreaking, entsha inthanethi Ekwenza Umlingiswa game okuletha top-izinga lanetibonwa, evulekile-jikelele omkhulu, ngezinga elikhulu PvP izimpi ekuphileni kumadivayisi eselula. Abadlali ekugcineni ukuzwa lokho ngempela kusho ukuthini ukuba langa, ngokugcwele-efakiwe, ophikelelayo MMORPG emhlabeni ingajatshulelwa eceleni izigidi zabantu emhlabeni wonke, bonke ngaphakathi entendeni yezandla zakho!
Manje sesifikile isikhathi sokuba new heroes avuke, ukuqala ehluke ngokuphelele umlando, ukuba ngisindise izwe ebumnyameni okuphakade.
※ EZIPHUMA EZISEMQOKA ※
▶ YANGEMPELA-TIME izimpi omkhulu
Battle nabanye abadlali esivusa amadlingozi sangempela, evulekile-field PvP izimpi noma ukulwa ngezinga oludumile nge yokuncintisana 50-vs-50 Fortress Siege olufana!
▶ lokubonwayo emangalisa
Inikwe amandla yi-the ngiyaphupha Engine 4, Lineage 2: Revolution odlulela imingcele yini imidwebo kungenzeka. Ubufakazi ungalokothi-ngaphambi-ukubonwa ihluzo kudivayisi yakho yeselula!
▶ Seamless VULA-WORLD
Hlola elikhulu, zinkulu, futhi aluhlaza evulekile bomhlaba evumela izinkulungwane abadlali kanyekanye ukuhlola, thola, futhi anqobe.
▶ kwamaqembu & zezentengiselwano
Iqembu nabangani guildmates, noma inhlangano up nezinkulungwane zabanye abadlali emhlabeni wonke ukuba sehlise abaphathi amaqhawe, bahlanganyele mass ukuziphilisa PvP ukulwa, futhi embule ngempango e yeqhawe kugasela emigodini.
Sicela uhlole izindaba zakamuva at isixhumanisi ngezansi.
"Lolu hlelo lokusebenza ludinga ukufinyelela isitoreji sedivayisi ukuthi zilondoloze idatha game.
Lokhu izosetshenziselwa ukuthi zilondoloze idatha umdlalo wakho. "
Ethandwa - Awokubambisana Iqhaza
Ethandwa Entsha - Awokubambisana Iqhaza
Grossing Ethandwa - Awokubambisana Iqhaza